KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Ciidamada Dowlada iyo AMISOM oo la wareegay Degmada Mahaday
Sunday 9 December 2012 11:39
Ciidamada Dowlada iyo AMISOM oo la wareegay Degmada Mahaday
Jowhar (KON) - Ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM ayaa la wareegay Magaaladii labaad ee ka tirsan gobalka Shabeelaha Dhexe ka dib markii waxyar ka hor ay la wareegeen magaalada Jowhar.
Wararka ka imaanaya halkaasi ayaa sheegaya in ciidamada ay haatan gaareen xaafado ka tirsan degmada Mahaday ee gobalkaasi, waxayna mareen wadada cariga ah.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ciidamada dowlada ay ku arkeen deegaanka Buurane oo ku dhow degmada Mahaday.
Wali ma jirto saraakiisha dowlada Soomaaliya wax faafin ah oo ay ka bixiyeen howlgaladaan ay kula wareegeen deegaano ka tirsdan gobalkaasi oo ay joogeen kooxda Al-Shabaab.
Wararkii ugu dambeeyay ee Dagaalda ka socda S/Dhexe kala soco Keydmedia.net